ओमि`क्रोन पोजेटिभ हुने बित्तिकै तुरुन्तै गर्नुहोस् यी ४ काम, छिट्टै छुटकारा पाउनु हुनेछ ! – List Khabar
Home / समाचार / ओमि`क्रोन पोजेटिभ हुने बित्तिकै तुरुन्तै गर्नुहोस् यी ४ काम, छिट्टै छुटकारा पाउनु हुनेछ !
admin February 10, 2022 समाचार Leaveacomment 80 Views
म`हामा`री भाइरसले विश्वभर तहसनहस बनाएको छ । ओमिक्रोन आएपछि अवस्था झन् गम्भीर बनेको छ । यो घा`तक भेरियन्टको आगमन पछि भारतमा कोरोनाका नयाँ दैनिक केसहरू दुई लाख नाघेको छ। कोरोनाको कुनै स्थायी उपचार छैन र यसै कारण विज्ञहरूले कोरोना रोकथाम र रोकथामका लागि खोप र कोरोनासँग सम्बन्धित अन्य नियमहरू पालना गर्न सल्लाह दिइरहेका छन्।
Previous भियाग्राको साइड इफेक्ट : ‘बेहोश हुने, पेट फुल्ने र स्मरणशक्ति घट्ने समस्या’
Next बिबाह नगरि आमा बनिन् यी नायिका , भन्छिन् मेरो प्रेमीको सन्तान हो